Nepal Auto | कोटेश्वरको जाम : विकल्प अन्डरपास कि फ्लाईओभर ?
कोटेश्वरको जाम : विकल्प अन्डरपास कि फ्लाईओभर ? 31 Ashad, 2076
काठमाडौं – सवारी साधनको अत्याधिक चाप हुने कोटेश्वर–जडिबुटी सडकखण्डमा जाम हटाउने विकल्प के होला ?
विभिन्न समाचारहरुमा सो क्षेत्रको जाम हटाउन अन्डरपास बनाइने वा फ्लाईओभर बनाउने आइरहेका हुन्छन् । समाचार जस्तै वास्तबमा यसको विकल्प के त ? सरकारी निकाय नै यसमा अन्योल रहेको पाइएको छ । यसले गर्दा निर्माणको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन।
कोटेश्वर, नयाँ बानेश्वर र त्रिपुरेश्वरमा अन्डरपास निर्माण तथा चक्रपथ सुधारका लागि एक अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। तर, कोटेश्वरको अन्डरपास कि फ्लाइओभर भन्ने एकीन नहुँदा अलमल भएको छ। सडक विभागका सूचना अधिकारी अर्जुन सुवालले पनि यही कुरालाई इंगित गरेका छन् ।
कोटेश्वर सडकखण्ड ६ लेनको छ। तैपनि, कोटेश्वरदेखि जडिबुटी हुँदै भक्तपुरको गठ्ठाघरसम्म ट्राफिक जाम हुने गरेको छ। त्यस कम गर्नका लागि छिट्टै निर्माण कार्य अगाडि बढाइने सुवालले बताए।
सडक विभागले कोटेश्वर खण्डको जामलाई कम गर्न र नियन्त्रण गर्नका लागि भक्तपुरबाट कोटेश्वरको बाटो हुँदै ललितपुर जाने साना सवारीसाधनलाई मनोहरा करिडोर डाईभर्सन प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको छ। तर पनि दिनदिनै ट्राफिक जाम बढ्दै गएको छ।
यसका लागि मनोहरा करिडोरको डाईभर्सन दुई महिना अघि सञ्चालनमा ल्याएको थियो। तर यसले पनि राम्रो काम गरेको छैन ।
जडिबुटी–पेप्सिकोला–काँडाघारी सडकखण्डमा पनि अत्याधिक ट्राफिक जाम बढेको छ। चौतर्फी सडक भएपनि सानो भएकाले जाम बढ्ने गरेको छ।
सम्बन्धित निकायले यसको वारेमा धेरै अध्ययन गरे तापनि यसले ठोस रुप लिन सकेको छैन । आशा गरौ, केही सयममै यो क्षेत्रमा जामको अन्त्य हुनेछ ।
नेपालगञ्जमा खुल्यो टाटा मोटर्सको सोरुम र सेवा केन्द्र
काठमाडौं – भारतीय अटोमोबाइल कम्पनी टाटा मोटर्सले नेपालगञ्जमा आफ्नो सोेरुम र सेवा...
पेट्रोल बोक्ने ट्यांकर त्रिशुलीमा खस्यो, चालकसहित ट्यांकर बेपत्ता
चितवन । त्रिशुली नदीमा ट्यांकर खस्दा चालकसहित ट्यांकर बेपत्ता भएको छ । काठमाडौँब...